Ukuthengwa konyaka omusha-2018: TOP-3 yezinto ezihamba phambili kakhulu
Kuze kufike amaholide amakhulu ebusika - izinsuku ezimbalwa. Futhi lokhu kusho ukuthi ungakwazi ukubamba ngokugcwele izibuko ezithintekayo, okuhambisana nemikhiqizo eminingi yasekhaya neyangaphandle. Yiziphi izinto ezintsha ozithokozisa ngazo? Kuhlu lwethu lokushaya kukhona izinto ozokugqoka ngokuzithandela ngonyaka weNja eliphuzi.
Izibuyekezo ezingu-TOP-3 zamantombazane ezithakazelisayo
Amaqabunga e-pastel shades
Ama-blous amahle akasoze akwazi, futhi ngisho nasemhlabeni wonke-ngisho nangaphezulu. Izimpawu ze-stylish-shirt-2018: Indwangu ephezulu ye-lightweight (isilikhi, i-chiffon ebanzi, ukotini), imininingwane engavamile, izintambo entanyeni, i-pastel palette. Okuphezulu kuyoba yintandokazi ecacile ye-wardrobe yakho: ngosizo lwakho ungenza izingubo eziningi zansuku zonke noma zokuhlwa. Hlanganisa nge skirt ipensela, jeans oyintandokazi, izinwele zeboya kanye sarafans. Ingabe ufuna ukufinyeleleka? Engeza i-pair of izesekeli ezikhanyayo kanye ne-lipstick ebomvu.
Ukukhwabanisa kwe-Fashion-2010 kwabesifazane besimo
Ijacket noma i-blazer - yingxenye ebalulekile ye-wardrobe eyisisekelo. Yiba nomkhuba: qaphela amanoveli we-textured corduroy noma i-velvet. Indwangu enombala enemibala yembala yombhalo izokwengeza ubuhle emgqeni ongenhla - ukuze ukwazi ukuhlukanisa ngobuciko isitayela sakho se-cacheal. Hlanganisa le jackethi nanoma yini ephuma ekamelweni - t-shirts, ama-turtlenecks, iziketi kanye nama-jeans. Ijaji le-Velvet lizoba ngumngane omuhle kakhulu wezingubo ezifanayo noma izingubo zokugqoka.
Izingubo ezintsha ezivela ku-velvet: izitayela futhi zisebenza kahle
Yini engcono kakhulu kunezikebhe? Izikebhe kuphela eziwumthunzi "olungile". Unyaka wejaja eliphuzi usinikeza izinhlobonhlobo ze-palette ye-solar - kusukela ku-lemon-lwesinaphi kuya kumathoni e-golden-bronze. Uma ungewona umsizi ophuzi - qaphela umthunzi ojwayelekile entwasahlobo-2018 ngokusho kwe-Pantone version: catchy ultraviolet.
Umbala ophuzi obala: original kanye fresh
Indlela yokukhetha igqoke elide elide ku-prom
Izambatho zangaphansi zobuciko ezenzelwe abesifazane
Indlela yokukhetha ingubo yokugqoka yangaphansi kwesifazane efanele
I-Spikes - ukuhlobisa okuthambekeleyo kowezi-2014
Ikhekhe le-puff nge-pita isinkwa nesitshalo seqanda
Namathisela esikhumbeni bese ulwa nabo
Ukuzivocavoca kokwelapha kwezandla
Amakhekhe wekhofi-chocolate nge-walnuts
Uhlobo oluhle lwenja yengane eneminyaka engama-4 ubudala
Zonke izinzuzo kanye nokuqeda ukwabelana nokulala nomntwana
Amakhukhi aphumule ane-pepper
Imithi yendabuko: induna ebunzini
I-oily caramel ukhilimu nge-peanut grill
SPA ukunakekelwa komzimba
Ukucindezeleka: izindlela eziyisisekelo zokuvimbela nokulawula ukucindezeleka
Isobho elimnandi ngezilwane zasolwandle
Lapho uSanta Claus wangempela ehlala khona